भर्खरै आयो खुशीको खबर कोरोना निको पार्ने खो,पको आ,बिस्कार, यसरी भयो च,मत्कार हेर्नुहोस्…(भिडियो सहित) ।
कोरोनाको शंका लाग्यो ? यी नम्बरमा फोन गर्नुुस् , जनचेतना को लागि सक्दो शेयर गर्नुहोस!
काठमाडौं : सरकारले चीनमा रहेका नेपाली नागरिकलाई ल्याउने तयारी पूरा भएको जनाए पनि कहिले ल्याउने र कहाँ राख्ने भन्ने यकिन भएको छैन । आज प्रतिनिधिसभामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले सम्भावित संक्रमितलाई लक्ष्य गरेर तीन अस्पतालमा ४३ बेड छुट्याइएको बताएका छन् । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, पाटन अस्पताल र वीर अस्पतालमा ती बेडहरुलाई आइसोलेट गरिएको बताइएको छ ।